Sadexdaan Sabab Dartood Gabaryahay Uma Baahnid Dib Weyn Si Aad U Heysatid Ninkaaga - Aayaha
Haween badan ayaa ku waashay helitaanka dib weyn, tanina waxay haween badan naftooda ku galiyeen halis.
Si kastaba, warka aanan wanaagsaneyn ayaa waxa uu yahay waad heli kartaa dib weyn walina waad weyn kartaa ninkaaga, warka wanaagsana waxa uu yahay waad lahaan kartaa dib yar waadna heysan kartaa ninkaaga oo ku jecel isla markaana ku qadariyo.
Haddii uu ku jecelyahay, naftaada ayuu jecelyahay
Ninka kujecel waa nin aanan dib weyn ama daba weyn aanan kugu jecleyn, waxa uu jecelyahay naftaada, dhab ahaantii wuxu jeclaanayaa naftaada inkbadan jirkaaga, daba weyn ama dib weyn muhiim ma ahan.
Sida aad tahay ayaad ku qurxantahay
Ha ogolaan in bulshada dareen nooc kale ah ku siiyaan, aad ayaad ugu qurux badantahay qaabka aad tahay, ninka wnaaagsan wuu ogaanayaa tan, marka aad heysatid nin wanaagsan noloshaada, sina uma walwaleysid kamana walwaleysdi weyninka dibkaaga.
Dib weyn oo aanan qalbi wanaagsan lahayn waa baako ama qolof
Dib weyn oo aanan maskax lahayn, qalbi wanaagsan lahayn, iyo shaqsiyad qurux badan waa baako dheeraad ah, soo jiidahsda ay yeelan karto dibka weyn ama dabada weyn micno malahan nina kuma ceshan kartid, dhab ahaantii waxaad u baahantahay qaab aad ku ilaashatid ninkaaga.
Inaad diiradda saartid dibkaaga intaad diiradda saari lahayd qiimahaaga waa mudnaan aanan loo baahneyn.
Previous articleDaawo: Mursal Muuse oo hees cajiib ah ku ammaanay Hodan Cabdiraxmaan “Hodan Xayo Wanaageey”
Next articleHeesta Cusub ee Mursal Muuse ku Aamaanay Gacalisadiisa Hodan Cabdiraxmaan oo qoraal ah
Aayaha editor - September 24, 2018 0
Saaxiibayaal kusoo dhawaada qeybtii labaad ee sheekadii la magac baxday Kulankii ugu dambeeyay ee isku bedelay Farxadda:- Farxiyo mar walba jacayl xad dhaaf ah ayay...
9 Waxyaabood Oo Ay Tahay In Haweeney Kasta Ay Ninkeeda Ugu...
3 Calaamadood Oo Digniin Ah Oo Ku Tusaya Inaad Ku Jirtid...
Calaamadaha Lagu Ogaado Inaad Tahay Nin Gabadha Uu Jecelyahay Ay Bari...